1653nm DFB Butterfly Laser Diode CH4 Detection ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက် - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > DFB လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည် > CH4 စစ်ဆေးခြင်းအတွက် 1653nm DFB လိပ်ပြာလေဆာ Diode
CH4 စစ်ဆေးခြင်းအတွက် 1653nm DFB လိပ်ပြာလေဆာ Diode
164nm DFB Butterfly Laser Diode CH4 Detection အတွက်ဓာတ်ငွေ့ပျင်းရိခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေခြင်းအတွက်နည်းလမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းသည်ပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အကွာအဝေးစစ်တမ်းကိုရရှိနိုင်ရန်ရောင်စဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပြုလုပ်ရန်လေဆာကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်လောင်ကျွမ်းသောဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေခြင်းအပိုင်းတွင်အလင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
CH4 Detection အတွက် 1653nm DFB Butterfly Laser Diode ၏အကျဉ်းချုပ်
1653nm DFB Butterfly လေဆာ Diode ကိုသဘာဝဓာတ်ငွေ့ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေခြင်းအတွက်နည်းလမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းသည်ပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အကွာအဝေးစစ်တမ်းကိုရရှိနိုင်ရန်ရောင်စဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပြုလုပ်ရန်လေဆာကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်လောင်ကျွမ်းသောဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေခြင်းအပိုင်းတွင်အလင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လေဆာရောင်ခြည်ကို FB, DFB နှင့် CWDM ကဲ့သို့သောနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ပံ့ပိုးပေးသည်။ ၎င်းသည်လှိုင်းအလျား ၁၆၅၂.၇ မှ ၁၆၅၄.၇ မီလီမီတာအထိလေဆာကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ laser diode သည် 10mW အား 2.5Gbps ဖြင့်ထောက်ပံ့နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်၎င်းမှာ 10mA မှ 35mA မှအနိမ့်တံခါးခုံလက်ရှိရှိပါတယ်။
CH4 Detection အတွက် 1653nm DFB Butterfly Laser Diode ၏နိဒါန်း
CH4 Detection အတွက် 1653nm DFB Butterfly Laser Diode ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး multiquantum ကောင်းစွာ (MQW) ဖြန့်ဝေ - တုံ့ပြန်ချက် (DFB) လေဆာ;
TEC နှင့် Thermistor ပေါင်းစည်းခြင်း။
4. CH4 စစ်ဆေးခြင်းအတွက် 1653nm DFB လိပ်ပြာလေဆာ Diode ကိုအသုံးပြုခြင်း
ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် passive အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှုစမ်းသပ်ခြင်း;
CH4 Detection အတွက် 1653nm DFB Butterfly Laser Diode ၏ Optical-Electrical လက္ခဏာများ
လှိုင်းအလျားအလယ်ဗဟို အိုင်စီ TL = 15ï½ž35â "ƒ CW 1653.2 1653.7 1654.2 nm
optical output ကိုပါဝါ PO CW 10 - - mW
ဆင်ခြေလျှောထိရောက်မှု ƞ CW 0.05 0.08 0.2 mW / mA
operating လက်ရှိ ဟုတ်ပြီ CW - 150 200 mA
လေဆာရှေ့သို့ဗို့အား VF CW - 1.2 3.0 V
လှိုင်းအလျားပျံ့ (EOL) â –³Î » ၂၅ နှစ်တာကာလကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည် - - ± 0.1 nm
6. Package drawing&PIN-OUT Definition(ယူနစ်:mm) CH4 ထောက်လှမ်းဘို့ 1653nm DFB လိပ်ပြာလေဆာ Diode ၏
7. Deliver,Shipping And Serving CH4 ထောက်လှမ်းဘို့ 1653nm DFB လိပ်ပြာလေဆာ Diode ၏
A: SM fiber သို့မဟုတ် PM fiber?
Q: မည်သည့် PIN နံပါတ်ကိုအလိုရှိပါသနည်း။
A: အမျိုးအစား 1 or အမျိုးအစား 2.
hot Tags:: 1653nm DFB Butterfly လေဆာရောင်ခြည် Diode CH4 ကိုရှာဖွေခြင်း၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊
1653nm DFB လိပ်ပြာလေဆာ Diode